U-Hushpuppi ufumana igqwetha elitsha-amaNigerian, ama-Afrika kunye neMbali yeHlabathi
Hushpuppi ufumana elinye igqwetha elikumgangatho ophezulu, uqhankqalazo luqhume kulo lonke elase-US, ukubulawa okurekhodiweyo, uJan Vertonghen ushiya iTottenham. Hlala wazi ngeRave News Digest yethu eshwankathela iindaba ezihlanu ezishushu zehlabathi ekufuneka uzifumanele, zikongela ixesha namandla. Yithathele ingqalelo njengengxelo yakho yemihla ngemihla.
1. UHushpuppi ufumana elinye igqwetha elikumgangatho ophezulu eCarlifonia
Njengetyala lobuqhophololo elichasene URamon 'Hushpuppi' Abbas uya eLos Angeles eCalifornia, UGal Pissetzky, igqwetha lakhe, liya kuxhaswa lelinye igqwetha elikwinqanaba eliphezulu, UVicki Podberesky.
Unksk Podberesky waseAndrues / Podberesky womthetho osekwe eLos Angeles ugxile ekumeleleni abantu kuwo omabini la matyala kunye nemicimbi yolwaphulo-mthetho, kunye neenkampani kunye nabantu abasebenza kwezophando.
Kuqokelelwe ukuba uMnumzana Pitsetssky, igqwetha eliphambili lezokhuseleko, onelayisensi kuphela yokuqhuba eChicago, ufake isicelo sokuba avele kwi-Pro hac vice egameni leHushpuppi eCalifornia. I-Pro hac vice ibhekisa kuqheliselo apho igqwetha elingavunyelwanga ukuba lenze into ethile kugunyaziwe ukuba lithathe inxaxheba kwityala elithile kuloo mthetho.
2. IGhana: IAkufo-Addo yokuqalisa ukhenketho lweentsuku ezi-3 kuMantla, eMantla Mpuma, nakwimimandla yaseSavanna
Mongameli Akufo-Ado ukusukela ngoMvulo, kuJulayi, 27 aqalise ukhenketho lweentsuku ezintathu kwimimandla yaseMantla, eMntla Mpuma, kunye nakwimimandla yeSaveanna yeli lizwe. Kulindelwe ukuba kolu hambo athambise iiprojekthi, aqhekeze iiprojekthi ezintsha zokuqalisa nokundwendwela amabhotwe ahlonitshwayo amagunya emveli.
Uninzi lweeprojekthi umongameli aya kuthi aziphalaze ziiprojekthi ezinxulumene namanzi kuluntu kubandakanya iYapei Kusawgu kunye neNalerigu.
3. Ukuvalwa kweKapa: Uqhushululu oluninzi luqhekezwa, iindlela ezivaliweyo zezithuthi
IKapa ivuke koqhanqalazo ngokubanzi ngoMvulo, ngeendlela ezinkulu ezichaphazelekileyo zenziwe yimiboniso, yanyanzeliswa yiCape Colored People's Congress; eyaziwa ngokuba yi intshukumo ye 'Gatvol Capetonia'.
Iingxelo zamanyathelo acetyiweyo oqhanqalazo zisiwe kumajelo eendaba nakumagosa esiXeko saseKapa ngeCawe ebusuku. I-Adadi kaFadielInkokeli yombutho we-Gatvol, echaza uluhlu lweemfuno ezijongana nelifa elonakalisayo yocalucalulo - okukhokelele kwingxaki enkulu yezindlu eCape Flats - nakwiinkqubo zokugxothwa kweSixeko ezikhuselweyo nezikhuselweyo yongamela ngu JP Smith, ilungu leMayco loKhuseleko noKhuseleko.
4. Iikhuselo ziyaqhekeza e-US kwaye zijike zabulala eTexas
Uqhanqalazo olunoxolo luvuseleleke kugonyamelo kwilizwe lonke kule mpelaveki. Ingxwabangxwaba enkulu yaqhambuka kwizixeko ezininzi, kugxilwe kubukhoboka bamapolisa, kwaye kubonakala ngathi kwakhula ngo-Mongameli I Trump izicwangciso zokuthumela ngakumbi kwi-federal inyanzelisa. Ababonisi abaninzi bathi ugonyamelo lujongela phantsi umyalezo wabo.
E-Austin, eTexas, bamalunga ne-100 abantu ababehamba xa kwakuqhushumba udubulo, eneminyaka engama-28 ubudala Ukunyusa uGarrett. Amapolisa athi u-Foster, owayekade enoqhankqalazo rhoqo ukusukela oko wasweleka UGeorge Floyd, wayephethe ngokusemthethweni i-AK-47 ngelo xesha. Yena nabanye ababhikishi, ngokutsho kwabasemagunyeni, bajikeleza imoto emva kokuba umqhubi eguqukele kumsindo.
Umqhubi wavula umlilo, wabetha u-Foster ngaphambi kokuba abaleke. Umqhubi kamva ubize i-911 kwaye wathi uFoster ubakhombise umpu phambi kokuba baphinde babuye.
5. UJan Vertonghen: Umkhuseli waseTottenham ushiya ugqithiso olukhululekileyo emva kweminyaka esibhozo
UJan Vertonghen wadlala kwi-Champions League ukulahleka kokugqibela ukuya eLiverpool ngo-2019
Umkhuseli weTottenham UJan Vertonghen Uyishiyile iklabhu emva kweminyaka esibhozo. UVertonghen, oneminyaka engama-33, wenza ukubonakala kweTottenham ngama-315 kodwa wemka emva kokubona ixesha lakhe lokudlala liphelile phantsi komphathi omtsha Jose Mourinho ngeli xesha lonyaka. I-Belgian, egxotha njenge-arhente yasimahla, yanceda abakwaSpurs bafikelela kumagqibela kankqoyi kwiChamp League kunye neNdebe yeBhola yeBhola.
"Ke ngoku ixesha lam kwiklabhu liphela, usuku olubi ngenxa yezizathu ezininzi," UVertonghen wabhala ngeposi kwi-Instagram.
"Ndiza kubakhumbula abahlobo endibenzileyo apha, abasebenzi abaqhuba iklabhu, bedlala kwibala elitsha elimangalisayo, kwaye nina balandeli," wongezelela.